Kungani nathi - AlorAir
Kungani Ngidinga Dehumidifier?
Intuthuko kwezobuchwepheshe hhayi kuphela push umphakathi phambili, kodwa futhi ukuqwashisa yethu abebeziphilisa ngako. Lokhu kusho ukuthi okusezingeni eliphezulu kahle dehumidifier ingasiza abantu dehumidification lomoya, kanye nokunciphisa izindleko zokugcina esizayo. Ngokwesibonelo, umswakama ngokweqile kungabangela umonakalo ebizayo isakhiwo kanye izingxenye isakhiwo.
umswakama okweqile kungavuka umuntu emsebenzini noma niphila imvelo. Nakuba ngaphambili okucatshangwa ukuthi into yemvelo, sesiyazi manje ukuthi singakwazi ukuvimbela emiphumeleni elimazayo umswakama ngokweqile.
► Lapho Ingabe umswakama okweqile Zavela?
Kuye izinga lokushisa emoyeni, emoyeni ekwazi kwamahala kwenani elithile lamanzi esimweni vaporous. Lapho umoya epholisa, ikhono layo ukuze ubambe amanzi incipha ngokufanele. Lokhu kusho ukuthi umoya kudedela umswakama ngokweqile ezindaweni ezibandayo, okuyinto kudala dampness kanye ukufingqa thina bayawazi.
► Kungani Khetha Dehumidifiers for umswakama okweqile?
* Umonakalo Bezakhiwe
izakhiwo Ngokhuni singangena kule mkhuba futhi bola. Ngokuhamba kwesikhathi isikhunta futhi bola kungaholela nezindaba, ezifana izibuya esontekile futhi engalingani umnyango ozimele.
15% ukulungiswa zibe yizinkuni izingxenye zibangelwa bola kanye isikhunta. Lokhu kuholela engaba yizigidi eziyizinkulungwane ezingu-20 ubude izingodo singabhujiswa, okuyinto engcono kakhulu kunaleyo lokho lilimele ngomlilo.
izindonga yangaphandle kalula ungamunca umswakama ezindaweni zabo. Lapho okushisa surface kunciphisa nakakhulu, amanzi eyengeziwe amuncwa umzimba, okuholela umjikelezo elimazayo.
Dehumidifier ngeke luthathe umswakama ngokweqile kusukela imvelo futhi usize ukugcina izinto ngesikhathi nomswakama ezingeni efanelekayo. Lokhu kusiza ukunciphisa yesondlo izindleko bese ugcine umonakalo isikhunta okungenani.
Corrosion metal ngokuvamile kwenzeka ngenxa enomhwamuko. Household izinto zikagesi kanye izingxenye kagesi awukwazi ukusebenza uma ziba umswakama kakhulu emoyeni. Ukudla, imithi, izincwadi, futhi izingubo nazo sengozini ukwephula futhi bangaba sikhuntile kusuka dampness.
Dehumidifier anganikeza isixazululo olunzulu njalo lazo zonke izinkinga sakho se-USB. Usebenzisa i esebenza kahle, okusheshayo esebenza AlorAir dehumidifiers kuqinisekisa ukuthi zonke izimpahla zakho kahle zinakekelwa.
* Pest kucabanga
imvelo Manzi zisho ukuthi kukhanga kangakanani kuwo izinambuzane, ezifana umuhlwa, izintuthwane, futhi amaphela, bahlalela ekhaya lakho singabanjwa isikhathi eside ngenxa yeziteleka. Lokhu kucabanga inkathazo kungabangela umonakalo omkhulu ekhaya lakho kanye nezempilo.
Dehumidifier kalula ulondoloza ukhululekile nomswakama Izinga ephilayo lakho kanye nomsebenzi isikhala. Ngu afundwa emoyeni elomile futhi zikhululekile, ungakwazi wehlise inkathazo KWAMAGUNDANE futhi bathuthukise izinga lomoya.
Indoor amazinga isihlobo nomswakama ka 60% noma ngaphezulu, ngikwandise kakhulu amathuba isikhunta, isikhutha, isikhunta, athanda zokhuni, ukungcola, amakhadibhodi, kanye ephepheni.
Njengoba isikhunta lisakazeka, sikhipha ezinhlamvu emoyeni. Lokhu kuholela iphunga lokukhunta, futhi singathandeki, ngaphezu okwandisa ingozi izimo zezempilo yingozi.
A dehumidifier kungehlisa ngempumelelo nomswakama zasendlini, ukwenza kwemvelo yakho ngokunethezeka, futhi kunciphise namathuba okuthi izifo ezingathi sína kwababhemayo.
We Love ukuze ukusungula!
AlorAir inikeza uchungechunge eziphambili IAQ futhi dehumidification izixazululo ngokusebenzisa dehumidifiers, emoyeni Movers, emoyeni scrubbers, nokunye okuningi. Imikhiqizo yethu ezintsha ingasetshenziswa izicelo eziningi ezisukela zezimboni ukuba yokuhlala. Sithunywe ukuba niyeke innovating e imikhiqizo sinikeza amakhasimende ethu.
► Amakhoyili Advanced Dala COP okuphezulu
I ohlobo ku AlorAir dehumidifiers kukhona kunenani ohlobo we dehumidifier ezivamile. Ngaphezu kwalokho, ikhoyili kanye nomklamo fin kuhlanganisa izici ezivelele kungenziwa ayitholakalanga eshibhile, dehumidifiers ekhiqizwa mass. I oversized ikhoyili ukushisa Ungasusa izikhathi 2-3 ngoba umswakamo kakhulu kilowatt ngayinye njengoba dehumidifier ezivamile. AlorAir sika kahle kakhulu dehumidifier silondoloza kufika ku- $ 250 ngonyaka e izindleko energy futhi ngokuvamile iminyaka 10+ ne yeminyaka emihlanu yesiqinisekiso elinganiselwe.
► Epoxy yokumboza ngophawuda ku Amakhoyili
Ukuze ugweme Freon ukuvuza, ukushiyeka ebulalayo okwesikhathi dehumidifier, AlorAir usanda kwethula lento epoxy camera coil. Lesi sici ezintsha yelula ukuphila we ohlobo ngokunikeza isivikelo ezindaweni onakalisayo nokugcina ikhoyili sika ukushisa transferability. Ngaphezu kwalokho, ukusebenza kahle eliphezulu compressor rotary kuqinisekisa ukusebenza esiphezulu at the aphansi kungenzeka izindleko.
► Duty Heavy Condensate Pumps
Pumps ngokuvamile babe nezindaba ezibucayi ezifana okweqile, ukwehluleka ukuthola, futhi rusting. Ngenhlanhla, onjiniyela bethu baye basungula futha ukuthi uthembeke kakhulu. With 20 'ephakamisa ibanga, futha condensate kukunika inkululeko sokukhipha kuphi.
Zonke izintambo ku AlorAir sika condensate futha une okusheshayo Imigudu Connect. Lokhu kwenza ukufakwa kanye nokugcinwa kusheshe futhi kube lula.
► Ukufinyelela okusheshayo Yangaphakathi Izingxenye
Zonke dehumidifiers AlorAir ukuhlinzeka ukufinyelela okulula izingxenye zangaphakathi. The Storm Series has a ikhava clamshell kuyilapho iSentinel Series ifakwe ukufinyelela panel. Ngaphezu kwalokho, futha has izintambo esheshayo ukuxhumana, ngakho-ke kungenziwa kalula zisuswe ngaphandle zokufinyelela ibhodi control.
► buqama Humidistat
humidistat yethu kude kwenza AlorAir dehumidifiers yimpendulo enhle, lapho iyunithi uzobe ducted kwelinye ikamelo. I humidistat futhi izici ozikhethela imbobo ukukhwezwa Flanges, okuyinto ukunciphisa isikhathi ukufakwa lapho yokuxhuma uhlelo ababephelezela.
► Inzwa nge Dula Air Design
Zonke dehumidifiers AlorAir zihlanganisa inzwa nomswakama nge Dula Air Design, okuyinto kuvimbela ngebhayisikili iDemo. Izinzwa kalula bahlukunyezwe ukushisa kwangaphakathi kanye nomswakama, abenze othambekele ethola amasignali okungalungile ukuze amandla vula noma vala. Ngebanga lalokho, lokhu sifushanise sempilo we compressor futhi kwenza uhlelo refrigerant engazinzile. Ukuze ulwe lolu daba, Dula Air Design ivumela inzwa ukuba ngci ngokuphelele ukushisa kwangaphakathi kanye nomswakama.
► sahlulwa Main IBhodi Ukusebenza
Ibhodi main kungaba ngendlela ephawulekayo nomthelela ekusebenzeni dehumidifier yakho. Ngenxa yalokhu, wonke wesifunda amabhodi AlorAir kuthiwa camera sokuvikelwa. Ibhodi kuwubufakazi kokuphazamisa futhi amelana magnetization. Izingxenye nokusebenza ibhodi ngalinye 100% ihlolwe.
► Ductable Unit yenza lula impilo yakho
I AlorAir umndeni ka dehumidifiers inikeza izesekeli ezihlukahlukene izicelo. I kits imbobo uvumele amayunithi ufakwe endaweni eyihlane, ezifana egumbini mechanical, futhi elawulwa esivela kwelinye igumbi ekhaya. Kwezinye izicelo, a humidistat akude kungase kudingeke.
Kanjani AlorAir Gcina Wena Imali?
Ukulawula amazinga nomswakama ekhaya lakho kuyisihluthulelo ukuvikela ekhaya lakho, ezempilo, kanye nomndeni. Kuvele AlorAir dehumidifier kuyinto isixazululo ezingabizi izinkinga zakho nomswakama. Utshalomali kokuqala e aphakeme izinga lomoya onempilo endlini kungenziwa zibuyiswe ngemva kweminyaka embalwa imali namandla.
I COP eliphezulu dehumidifiers AlorAir sika ungagcina wena kuze $ 250 izindleko energy kuqhathaniswa dehumidifiers ezivamile. Kuvele AlorAir dehumidifier ngokuvamile iminyaka 10+ futhi iza yeminyaka emihlanu yesiqinisekiso elinganiselwe. Lokho yokonga esivezwa incurred kusukela ekunciphiseni air conditioning izindleko. Uma bayakwazi ukulondoloza okuhlangene umswakama nesihlobo 50% noma ngaphansi, HVAC yakho ngeke zisebenze kanzima ukugcina lokushisa ukhululekile.
utshalomali yakho dehumidifier AlorAir ngeke kuphela ukunikeza ukonga amandla kodwa, izophinda ukwakha isikhala ephilayo ukhululekile futhi unempilo.
New Uzit Phinda Dispatch
amadivaysi AlorAir sika izikhwebu sokubuyiselwa futhi yokuhlanza:
Ukuthola isixazululo esingcono kakhulu zingase zibe yinkimbinkimbi futhi esiyindida abathengi ongenalwazi. AlorAir isungule Packages yokuvuselela amaningi:
1. Buyisela umonakalo amanzi
2. Speed ​​kususwe isikhunta
3. Sika phansi ngemva-uzamcolo yesondlo icala